kooxda Manchester United oo Liverpool & Chelsea kula soo biirtay cayrsiga Ivan Perišić – Gool FM
kooxda Manchester United oo Liverpool & Chelsea kula soo biirtay cayrsiga Ivan Perišić
(Milano) 24 Maarso 2017 – Kaddib xiisihii Liverpool & Chelsea kooxda Manchester United ayaa haatan si wayn loola xiriirinayaa laacibka reer Inter ee caalamiga ah ee Croatia jaalle Ivan Perisic.
Laacibkan garab-weerarka ah ayaa waxaa isku haysa kooxaha reer Premier League marka xagaaga la gaaro, iyadoo sida ku qoran The Sun, ay kooxda Jose Mourinho ee Manchester United aya xagaaga si wayn u doonayso laacibkan, iyadoo Mou la sheegay inuu shakhsiyan u duulay Croatia si uu ula kulmo laacibka.
Xulka Croatia ayaa fiidkan wajahaya Ukraine oo ay Zagreb ku wada ciyaarayaan, iyadoo Inter la sheegayo inaysan diyaar u ahayn fasixitaanka 28-jrkan Perisic, balse diyaar bay u tahay haddii loola yimaado dalab gaaraya €40m.
Waxaa jirta arrin kale oo muhim waayo laacibku wuxuu dhowaan iska bedeley wakiilkiisii isagoo ka dhigtay Fali Ramadani iyo Pini Zahavi, oo ah wakiillo xiriir wanaagsan la leh Premier League.
Warsidaha The Sun ayaa ku doodaya in cidda ka dambaysa qorshahan Manchester United uu yahay maareeyihii ciyaaraha ee hore ee Real Madrid Predrag Mijatovic, balse wax kasta waxay ku xirnaan doonaan halka ay Inter ku dhamaysato fasalkan, maaddaama haddii ay Champions League ka maqnaato ay wax iska bedeli doonaan martabadeeda FFP.
GOOGOOSKA: Spain vs Israel 4-1 (Spain oo Israel ihaanaysay)